ချမ်းသာချင်သူတို့အတွက် နည်းလမ်း ၅ ချက် – Gentleman Magazine
ချမ်းသာချင်သူတို့အတွက် နည်းလမ်း ၅ ချက်
လောကကြီးမှာ တချို့သူတွေက ငွေလွယ်လွယ်နဲ့ ရှာနိုင်ကြပြီး တချို့တွေကျ လုံးလည်ချာလည် လိုက်နေကြတယ်လို့ တွေးမိဖူးပါသလား။ မှန်ပါတယ်။ တချို့သူတွေက ငွေရှာပိုကောင်းတတ်ကြပါတယ်။ သတင်းကောင်းတစ်ခုပေးပါမယ်။ ငွေရှာတဲ့နေရာမှာ ဆရာတစ်ဆူဖြစ်အောင် လေ့ကျင့်ယူနိုင်ပါတယ်။ ပိုပြီးကောင်းတဲ့ သတင်းတစ်ခုရှိပါသေးတယ်။ ငွေ လွယ်လွယ်နဲ့ ရှာနိုင်မယ့် နည်းလမ်းငါးခု အောက်မှာ ရှိပါတယ်။
၁. အဆင်မပြေဖြစ်တာကို အသားကျအောင် လေ့ကျင့်ယူပါ
လူတိုင်း သက်တောင့်သက်သာ နေချင်ကြတာချည်းပါပဲ။ သက်တောင့်သက်သာနေရဖို့ဆိုတာ အလယ်အလတ်တန်းစားလူတွေရဲ့ အဓိကရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ ပြောစရာရှိတာက သူဋ္ဌေးတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ မလွယ်ကူပါဘူး။ သက်တောင့်သက်သာနေရအောင် ကြိုးစားနေရင် သူဋ္ဌေးဖြစ်ဖို့ အနှောင့်အယှက် ဖြစ်ပါတယ်။
ငွေများများရှာချင်ရင် သက်တောင့်သက်သာမရှိတဲ့ဘဝထဲမှာ အဆင်ပြေပြေနေတတ်ရပါမယ်။ ချမ်းသာချင်ရင် တစ်ခုခုပေးဆပ်ရမှာပါ။ ခဏလေးပေးဆပ်ပြီးရင်တော့ တစ်သက်လုံး သက်တောင့်သက်သာ နေသွားနိုင်ပါပြီ။ သက်တောင့်သက်သာမရှိပေမယ့် ငွေဝင်ဖို့ အထောက်အကူပြုတဲ့ အလုပ်ငါးခုကို ဒီနေ့ပဲ စလုပ်လိုက်ပါ။
၂. ချမ်းသာဖို့အကြောင်းပဲ စဉ်းစားပါ
သာမန်လူတွေကတော့ လွှမ်းမိုးခံရတာကို မကောင်းဘူးပဲ ထင်ကြမှာပါ။ အမှန်ကတော့ ချမ်းသာတဲ့သူတွေဟာ အောင်မြင်မှုရဲ့ လွှမ်းမိုးမှုကို ခံနေရတာ ချည်းပါ။ ချမ်းသာတဲ့သူတွေဟာ ဘဝနဲ့ စီးပွားရေးကို ဂိမ်းတစ်ခုလို့ မြင်ပါတယ်။ သူတို့ နိုင်ရမယ့်ဂိမ်းပါ။ သန်းနဲ့ချီပြီး ချမ်းသာတဲ့သူတွေ ဘာကြောင့်ဆက်ပြီး ငွေရှာနေလဲဆိုတာ အကြောင်းရှိပါတယ်။ သူတို့ဘဝမှာ ငွေဟာ အရေးမဟုတ်တော့ပါဘူး။ အောင်မြင်မှုနဲ့ အလုပ်ပြီးမြောက်မှုကိုသာ အလေးထားကြတာပါ။
ချမ်းသာချင်စိတ်ရဲ့ လွှမ်းမိုးမှုခံရတာဟာ မမှားပါဘူး။ ဘဝမှာ အောင်မြင်ဖူးတဲ့သူတွေဟာ ပိုအောင်မြင်တတ်ကြပါတယ်။ အောင်မြင်မှုရဲ့ ခံစားချက်က ဘယ်တော့မှ အိုဟောင်းမသွားပါဘူး။ ငွေများများရှာချင်တယ်ဆိုရင် ကိုယ် ဖြစ်ချင်တာကို စဉ်းစားပြီးတော့ အဲဒါကိုရဖို့ ဘာတွေကို စတေးနိုင်လဲ ဆိုတာ ဆုံးဖြတ်ပါ။ သင့်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် စည်းကမ်းနဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာ ရည်မှန်းချက်နဲ့ ထပ်တူညီနေရပါမယ်။
၃. ငွေကို မိတ်ဆွေလို့ သဘောထားပါ
လူတော်တော်များများက ငွေကို ရှားပါးထူးဆန်းတဲ့၊ ရဖို့ခက်ခဲပြီး ထိန်းသိမ်းဖို့က ပိုတောင်ခက်ခဲတဲ့ အရာအဖြစ် မြင်တတ်ကြပါတယ်။ ငွေများများလာအောင် ဆွဲဆောင်ချင်ရင်တော့ ငွေကို သင့်ရဲ့ အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေလို့ မှတ်ယူထားလိုက်ပါ။ အခက်အခဲအားလုံးကို အဆုံးသတ်ပေးမယ့်၊ သင့်ဘဝကို ကယ်တင်ပေးမယ့် မိတ်ဆွေကောင်းကြီး အနေနဲ့ပေါ့။ လူချမ်းသာတွေဟာ ငွေကို သူတို့ကို အကောင်းဆုံးကူညီပေးနိုင်တဲ့ မိတ်ဆွေကြီးအဖြစ် မြင်တတ်ကြပါတယ်။ အဲဒိအမြင်က သူတို့နဲ့ ငွေကြား ဆက်ဆံရေးကို ပိုပိုပြီး ကောင်းလာစေပါတယ်။ ငွေကို ကိုယ့်မိတ်ဆွေအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုပါ။ သင့်စိတ်က ငွေပိုရအောင် စွမ်းဆောင်ပေးပါလိမ့်မယ်။
၄.ငွေရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်တွေကို ရှင်းဖို့ မကြိုးစားပါနဲ့
လူအများစုဟာ ငွေရှာတာက ထူးဆန်းလျှို့ဝှက်တယ်လို့ မြင်ထားကြပါတယ်။ အမှန်ကတော့ ငွေဆိုတာ စိတ်ကူးစိတ်သန်း အကြံဉာဏ်တွေကနေ ထွက်ပေါ်လာတာပါ။ စိတ်ကူးစိတ်သန်းများများရှိလေ ချမ်းသာလေလေပါပဲ။ ဈေးကွက်စီးပွားရေးဆိုတာ ငွေကို အကြံဉာဏ်တွေနဲ့ လဲတာပါ။ အကြံကြီးလေ ကောင်းလေ ငွေရလေပါပဲ။
ချမ်းသာသူတွေက ပိုတော်ကြတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကံပိုကောင်းလို့ ပညာပိုတတ်လို့လဲ မဟုတ်ပါဘူး။ လျှို့ဝှက်ချက်တွေ မရှိပါဘူး။ ငွေအကြောင်း ဘာမှမသိသေးတဲ့ ကလေးလေးတစ်ယောက်လို၊ အကုန်လုံး လိုချင်တာရတဲ့သူတစ်ယောက်လို ချဉ်းကပ်ပါ။ ငွေရှာတာ မလွယ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ရိုးရိုးလေးပါ။
လူတွေမချမ်းသာရတဲ့ အကြောင်းတစ်ခုကတော့ သူဋ္ဌေးဆိုတာ အချိန်တိုင်း အလုပ်လုပ်နေရတာဆိုပြီး အထင်မှားတတ်ကြလို့ပါ။ လူတော်တော်များများအတွက်ကတော့ ငွေဆိုတာ အချိန်နဲ့ ပေးဝယ်ရတာပါ။ ကြာကြာလုပ်မှ များများရတာပါ။ သူဋ္ဌေးတွေကတော့ အဲလို မဟုတ်ပါဘူး။
ကိုယ့်ဘာသာကြိုးစားလာတဲ့ သူဋ္ဌေးအများစုမှာ ပျော်စရာဘဝတွေ ရှိကြပါတယ်။ သူတို့ လုပ်ချင်တာ လုပ်နေရင်းနဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကနေ ငွေ တစ်နေ့လုံး ဝင်နေတာပါ။ သူတို့မှာ အပျော်ခရီးထွက်ဖို့ အချိန်တွေ ရှိပါတယ်။ ဝါသနာပါတာတွေ လုပ်နိုင်ပါတယ်။ သူတို့မိသားစုတွေနဲ့လဲ အေးအေးဆေးဆေးနေနိုင်ပါသေးတယ်။
ချမ်းသာသူတွေရဲ့ဘဝဟာ တခြားလူအားလုံးထက် ပျော်စရာကောင်းပါတယ်။ သူတို့ လုပ်ချင်တာအားလုံး လုပ်လို့ရနေပါတယ်။ လူတိုင်း ပျော်စရာဘဝရှိပြီး လက်ဖျားငွေသီးနေတဲ့သူ ဖြစ်ချင်ကြမှာပါ။ ချမ်းသာအောင် အခုပဲ အချိန်ယူ ကြိုးစားလိုက်ပါတော့။
ခမျြးသာခငျြသူတို့အတှကျ နညျးလမျး ၅ ခကျြ
လောကကွီးမှာ တခြို့သူတှကေ ငှလှေယျလှယျနဲ့ ရှာနိုငျကွပွီး တခြို့တှကြေ လုံးလညျခြာလညျ လိုကျနကွေတယျလို့ တှေးမိဖူးပါသလား။ မှနျပါတယျ။ တခြို့သူတှကေ ငှရှောပိုကောငျးတတျကွပါတယျ။ သတငျးကောငျးတဈခုပေးပါမယျ။ ငှရှောတဲ့နရောမှာ ဆရာတဈဆူဖွဈအောငျ လကေ့ငျြ့ယူနိုငျပါတယျ။ ပိုပွီးကောငျးတဲ့ သတငျးတဈခုရှိပါသေးတယျ။ ငှေ လှယျလှယျနဲ့ ရှာနိုငျမယျ့ နညျးလမျးငါးခု အောကျမှာ ရှိပါတယျ။
၁. အဆငျမပွဖွေဈတာကို အသားကအြောငျ လကေ့ငျြ့ယူပါ
လူတိုငျး သကျတောငျ့သကျသာ နခေငျြကွတာခညျြးပါပဲ။ သကျတောငျ့သကျသာနရေဖို့ဆိုတာ အလယျအလတျတနျးစားလူတှရေဲ့ အဓိကရညျရှယျခကျြဖွဈနတေတျပါတယျ။ ပွောစရာရှိတာက သူဋ်ဌေးတဈယောကျဖွဈဖို့ မလှယျကူပါဘူး။ သကျတောငျ့သကျသာနရေအောငျ ကွိုးစားနရေငျ သူဋ်ဌေးဖွဈဖို့ အနှောငျ့အယှကျ ဖွဈပါတယျ။
ငှမြေားမြားရှာခငျြရငျ သကျတောငျ့သကျသာမရှိတဲ့ဘဝထဲမှာ အဆငျပွပွေနေတေတျရပါမယျ။ ခမျြးသာခငျြရငျ တဈခုခုပေးဆပျရမှာပါ။ ခဏလေးပေးဆပျပွီးရငျတော့ တဈသကျလုံး သကျတောငျ့သကျသာ နသှေားနိုငျပါပွီ။ သကျတောငျ့သကျသာမရှိပမေယျ့ ငှဝေငျဖို့ အထောကျအကူပွုတဲ့ အလုပျငါးခုကို ဒီနပေဲ့ စလုပျလိုကျပါ။
၂. ခမျြးသာဖို့အကွောငျးပဲ စဉျးစားပါ
သာမနျလူတှကေတော့ လှမျးမိုးခံရတာကို မကောငျးဘူးပဲ ထငျကွမှာပါ။ အမှနျကတော့ ခမျြးသာတဲ့သူတှဟော အောငျမွငျမှုရဲ့ လှမျးမိုးမှုကို ခံနရေတာ ခညျြးပါ။ ခမျြးသာတဲ့သူတှဟော ဘဝနဲ့ စီးပှားရေးကို ဂိမျးတဈခုလို့ မွငျပါတယျ။ သူတို့ နိုငျရမယျ့ဂိမျးပါ။ သနျးနဲ့ခြီပွီး ခမျြးသာတဲ့သူတှေ ဘာကွောငျ့ဆကျပွီး ငှရှောနလေဲဆိုတာ အကွောငျးရှိပါတယျ။ သူတို့ဘဝမှာ ငှဟော အရေးမဟုတျတော့ပါဘူး။ အောငျမွငျမှုနဲ့ အလုပျပွီးမွောကျမှုကိုသာ အလေးထားကွတာပါ။
ခမျြးသာခငျြစိတျရဲ့ လှမျးမိုးမှုခံရတာဟာ မမှားပါဘူး။ ဘဝမှာ အောငျမွငျဖူးတဲ့သူတှဟော ပိုအောငျမွငျတတျကွပါတယျ။ အောငျမွငျမှုရဲ့ ခံစားခကျြက ဘယျတော့မှ အိုဟောငျးမသှားပါဘူး။ ငှမြေားမြားရှာခငျြတယျဆိုရငျ ကိုယျ ဖွဈခငျြတာကို စဉျးစားပွီးတော့ အဲဒါကိုရဖို့ ဘာတှကေို စတေးနိုငျလဲ ဆိုတာ ဆုံးဖွတျပါ။ သငျ့ရဲ့ ကိုယျပိုငျ စညျးကမျးနဲ့ ဆုံးဖွတျခကျြဟာ ရညျမှနျးခကျြနဲ့ ထပျတူညီနရေပါမယျ။
၃. ငှကေို မိတျဆှလေို့ သဘောထားပါ
လူတျောတျောမြားမြားက ငှကေို ရှားပါးထူးဆနျးတဲ့၊ ရဖို့ခကျခဲပွီး ထိနျးသိမျးဖို့က ပိုတောငျခကျခဲတဲ့ အရာအဖွဈ မွငျတတျကွပါတယျ။ ငှမြေားမြားလာအောငျ ဆှဲဆောငျခငျြရငျတော့ ငှကေို သငျ့ရဲ့ အကောငျးဆုံးမိတျဆှလေို့ မှတျယူထားလိုကျပါ။ အခကျအခဲအားလုံးကို အဆုံးသတျပေးမယျ့၊ သငျ့ဘဝကို ကယျတငျပေးမယျ့ မိတျဆှကေောငျးကွီး အနနေဲ့ပေါ့။ လူခမျြးသာတှဟော ငှကေို သူတို့ကို အကောငျးဆုံးကူညီပေးနိုငျတဲ့ မိတျဆှကွေီးအဖွဈ မွငျတတျကွပါတယျ။ အဲဒိအမွငျက သူတို့နဲ့ ငှကွေား ဆကျဆံရေးကို ပိုပိုပွီး ကောငျးလာစပေါတယျ။ ငှကေို ကိုယျ့မိတျဆှအေဖွဈ အသိအမှတျပွုပါ။ သငျ့စိတျက ငှပေိုရအောငျ စှမျးဆောငျပေးပါလိမျ့မယျ။
၄.ငှရေဲ့ လြှို့ဝှကျခကျြတှကေို ရှငျးဖို့ မကွိုးစားပါနဲ့
လူအမြားစုဟာ ငှရှောတာက ထူးဆနျးလြှို့ဝှကျတယျလို့ မွငျထားကွပါတယျ။ အမှနျကတော့ ငှဆေိုတာ စိတျကူးစိတျသနျး အကွံဉာဏျတှကေနေ ထှကျပျေါလာတာပါ။ စိတျကူးစိတျသနျးမြားမြားရှိလေ ခမျြးသာလလေပေါပဲ။ စြေးကှကျစီးပှားရေးဆိုတာ ငှကေို အကွံဉာဏျတှနေဲ့ လဲတာပါ။ အကွံကွီးလေ ကောငျးလေ ငှရေလပေါပဲ။
ခမျြးသာသူတှကေ ပိုတျောကွတာ မဟုတျပါဘူး။ ကံပိုကောငျးလို့ ပညာပိုတတျလို့လဲ မဟုတျပါဘူး။ လြှို့ဝှကျခကျြတှေ မရှိပါဘူး။ ငှအေကွောငျး ဘာမှမသိသေးတဲ့ ကလေးလေးတဈယောကျလို၊ အကုနျလုံး လိုခငျြတာရတဲ့သူတဈယောကျလို ခဉျြးကပျပါ။ ငှရှောတာ မလှယျပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ ရိုးရိုးလေးပါ။
လူတှမေခမျြးသာရတဲ့ အကွောငျးတဈခုကတော့ သူဋ်ဌေးဆိုတာ အခြိနျတိုငျး အလုပျလုပျနရေတာဆိုပွီး အထငျမှားတတျကွလို့ပါ။ လူတျောတျောမြားမြားအတှကျကတော့ ငှဆေိုတာ အခြိနျနဲ့ ပေးဝယျရတာပါ။ ကွာကွာလုပျမှ မြားမြားရတာပါ။ သူဋ်ဌေးတှကေတော့ အဲလို မဟုတျပါဘူး။
ကိုယျ့ဘာသာကွိုးစားလာတဲ့ သူဋ်ဌေးအမြားစုမှာ ပြျောစရာဘဝတှေ ရှိကွပါတယျ။ သူတို့ လုပျခငျြတာ လုပျနရေငျးနဲ့ ရငျးနှီးမွှုပျနှံမှုတှကေနေ ငှေ တဈနလေုံ့း ဝငျနတောပါ။ သူတို့မှာ အပြျောခရီးထှကျဖို့ အခြိနျတှေ ရှိပါတယျ။ ဝါသနာပါတာတှေ လုပျနိုငျပါတယျ။ သူတို့မိသားစုတှနေဲ့လဲ အေးအေးဆေးဆေးနနေိုငျပါသေးတယျ။
ခမျြးသာသူတှရေဲ့ဘဝဟာ တခွားလူအားလုံးထကျ ပြျောစရာကောငျးပါတယျ။ သူတို့ လုပျခငျြတာအားလုံး လုပျလို့ရနပေါတယျ။ လူတိုငျး ပြျောစရာဘဝရှိပွီး လကျဖြားငှသေီးနတေဲ့သူ ဖွဈခငျြကွမှာပါ။ ခမျြးသာအောငျ အခုပဲ အခြိနျယူ ကွိုးစားလိုကျပါတော့။
Previous: ချစ်သူကို အမြဲပျော်ရွှင်နေစေဖို့
Next: စက္ကန့်(၃၀)အတွင်း တစ်ဖက်သူ အထင်ကြီးလေးစားသွားစေဖို့